Maxay Siyaasiyiinta H/Gidir uga hor yimaadeen Musharax C/raxmaan C/shakuur..? (Tartanka Doorashada) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, ahna xubin ka mida Midowga Musharixiinta ayaa si toos ah keligiis uga hor yimid qaabka Xukuumadda xilgaarsiinta u kala saartay Guddiyadii Doorashada e cabashada laga qabay.
Go’aanka uu keligiis qaatay C/raxmaan C/shakuur inkastoo uu bannaanka soo dhigay khilaafka kala aragti duwanaashaha ah ee u dhaxeeya xubnaha Midowga Musharixiinta, haddana wuxuu si weyn uga muujiyey in siyaasiyiinta Beesha H/Gidir ay intooda badan ka horjeedaan Musharaxan la wada qirsan yahay inuu tartanka adag soo galay af iyo addin-na kula jihaaday Maxamed Farmaajo.
Siyaasiyigii ugu horeeyay ee ka hor yimid Aragtida C/raxmaan C/shakuur wuxuu noqday Musharaxa kale ee ay isku beesha kasoo wada jeedaan C/kariin Xuseen Guuleed oo ay ku tartamayaan inuu mid kasta noqdo musharaxa beesha ee Kursiga Madaxweynaha, isgoo u arkay fursad uu ugu dhowaan karo Ra’iisal wasaaraha.
Aragtida C/raxmaan C/shakuur oo inteeda badan waxay ahayd mid sax ah iyo go’aan ay ahayd inuu qaato Golaha Midowga Musharixiinta, balse uu la degdegay xaalad isaga u gaara darteed, waxaana hadda adkaaneysa inay Musharixiintu isla qaataan mowqifkiisa.
“Ma jirto talo laga geliyey ciddii cabashada qabtay, liiskana gudbisay oo ay ugu horreeyaan Midowga Murashaxiinta. Mana cadda hannaanka loo maray turxaan bixinta xubnaha. Waxaan aaminsanahay in inta badan xubnihii NISA ka tirsanaa, gaar ahaan kuwii dharcadda ahaa (Undercover) ay weli si xoog leh guddiyada ugu jiraan. Waxaan ka codsanaynaa Raysalwasaaraha in uu xallinta tabashooyinka u maro waddo sax ah oo daahfuran, hufnaan iyo dhexdhexaadnimo leh, si ay doorashadu u noqoto mid la isla ogolyahay” ayaa ka mid ahaa qoraalkii C/raxmaan C/shakuur soo saaray.
Daqiiqado kadib waxaa jawaabay oo Ra’iisal wasaare Rooble ka xigsatay musharax C/kariin Xuseen Guuleed oo qoraalkiisa ku yiri: “Waxaan soo dhaweynayaa go,aanka gudiga heer wasiir ee kala shaandheynta gudiga doorashooyinka. Anigoo u arka in ay gudigu dadaaleen, muujiyeena faafreeb ilaa xad lagu kalsoonaan karo. Waxaan soo jeedinayaa in hore loo socdo, si dalku u galo doorasho horseedda daganaasho iyo xasilooni siyaasadeed”
Xildhibaan C/xakiin Macallin Axmed oo xilli danbe ka mid noqday taageerayaasha Farmaajo, una dhow Rooble wuxuu isagu soo bandhigay halka sartu ka quruntay, wuxuuna u muuqday nin ku faraxsan sida ay wax u socdaan oo cadaawad gaara u haya Musharax C/raxmaan C/shakuur, wuxuuna qoraalkiisa ku yiri:
“Sida uu shaaciyay guddigii uu Ra’isul wasaaruhu u xilsaaray kala shaandhaynta xubana guddiyada doorashooyinka ee lagu muransanaa, Waxaa Madaxwayne Ahmed QoorQoor Madaxwaynaha Galmudug laga codsaday in uu soo Magacaabo xubanaha shanta ah ee loo gartay in aysan buuxin shuruudihii madax bannanida ee laga rabay Guddiga doorashada. Xubnaha kale ee aan la tilmaamin ama aan lagu sheegin wax cillad ah waxaan u rajaynaynaa in ay noqdaan kuwa shaqadooda u guta si hufnaani ku jirto, sigaar ah waxaan halkaan ugu xusayaa sxbkeey Mohamed Dahir Guled oo ahaa Guddoomiyaha Guddigii Doorashada ee Galmudug”
Ma jiro weli Siyaasi ama Xildhibaan kasoo jeeda Beesha H/Gidir oo taageero u muujiyey C/raxmaan C/shakuur, balse taas bedelkeed waxay muujiyeen inay ka horjeedaan ama ku faraxsan yihiin in la go’doomiyo.
Axmed Macaalin Fiaqi
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi wuxuu si toos ah u taageeray Guddiga RW Rooble ee kala saaray Guddiyada Doorashada, taasoo si cad u muujineysa inuu ka horjeedo aragtida C/raxmaan C/shakuur “Waxaan bogaadinayaa shaqada guddiga heer wasiir ee RW Rooble u xilsaaray kala shaandhaynta xubnihii guddigii doorashada ee cabashada laga keenay iyo go’aanka ay ka gaareen. Inkastoo dhallinyaro Soomaaliyeed ay ahaayeen xubnaha liiskooda la celiyey oo aan colaad gaar ah loo qabin haddana in dalka doorasho lagu kalsoon yahay ay ka dhacdo ayaa ku xirantay ayna lagama maarmaan noqotay in isbedel lagu sameeyo”.
Xildhibaan C/raxmaan Odowaa ayaa istaagay meel dhexdhexaad ah, wuxuuna doortay inuu arrinta ka hadlo, laakiin aanu mowqif ka qaadan, wuxuuna qoraal uu dhinac kale u rogay ku yiri: “Guddigii doorashooyinka in laga reebo 35 qofood oo cadaymo lagu helo(Shaqale, NISA, CBB) waxa ay cadeeyn u ahayd awood maroorsigii iyo musuqmaasuqii Farmaajo heerka uu gaarsiisnaa”
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo xubin firfircoon ka ahaa Midowga Musharixiinta wuxuu maalmo dhoweyd ka carooday qoraal ay isla qaateen inta badan Musharixiinta oo lagu cambaareyay RW Rooble, taasoo uu cadaawad uga kasbaday xubno ka mida Guddiga, balse maanta wuxuu keligiis ku noqday xaalad ay ahayd inuu saaxiibadiisa garab uga helo.
Waxaa soo baxday inuusan C/raxmaan C/shakuur taageero ka heysan siyaasiyiinta Beeshiisa, haddana uu sii luminayo Ra’iisal Wasaarihii uu rabay inuu dhinaciisa soo maro, waxaa kaloo muuqata inay wax badan uga xumaanayaan degdegga uu ku wajaho xaaladaha qabsada.
Ma dheera xilliga uu C/raxmaan C/shakuur noqon doono musharaxa ugu horeeya ee ka baxa Midowga Musharixiinta ama uu keligiis qaadaco Doorashada haddii aan xal loo helin xaaladan, waase musharax miisaan leh oo rajadiisa ku xiran tahay taageerada Soomaalida mabda’ ahaanta ugu hiilisa.
Previous articleAlshabaab oo Lacag ka badan 100-kun Doollar Diyo ahaan uga qaadatay Beesha Muddulood ee Sh/Hoose
Next articleKulan dhex maray RW Rooble iyo Safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya (Taageero laga codsaday UAE)